Iṅu Mmiri na ekpotu ọkụ agwakotara ya na mmanụ Robb anaghị egbu Coronavirus (COVID-19)
Enwere ozi nke na-ezighi ezi na-agagharị na ebe mgbasa ozidi iche iche na-ekwu na ịṅụ mmiri na ekpotu ọkụ agwakọtara ya na mmanu Robb, na egbu nje Coronavirus (COVID-19). Nke a abụghị eziokwu. Anyị nyochara ozi ahụ ma choputa na obu echiche na-ezighi ezi.
Ozi a si:
"Biko, m na-arịọ gị ka ị ghara idobe nke nani onwe gị, ị nwere ike ịchekwa ndụ. Ọ bụ maka Coronavirus. Ihe ndị a bụ ihe mgbaàmà nke Coronavirus: 1. akpịrị kpọrọ nkụ 2. akọrọ ụkwara 3. ọkọakpịrị 4. izeuzere na-enweghị nchịkwa na ụkwara. Biko ọ bụrụ n’ịhụta nke ọ bụla n’ime nke a, egbula oge ịṅụ mmiri na ekpotu ọkụ agwakọtara ya na mmanu Robb. N'ihi na nje na-anọ n'ime akpịrị mmadụ ruo awa iri na abụọ ma ọ dịkarịa ala. Ọ bụrụ na ịmeghị ihea ozugbo dị ka ndụmọdụ nke ndị nchịkọta okwu ahuike na mba dị icheiche nyere, nke ahụ bụ mgbe nje virus ahụ ga-enwe ohere ịbanye n'ime ahụ gị, ma oge ahụ sistemụ mgbochi gị niile ga ada mba, ị gaghị anọ karịa ụbọchị iri na anọ na elu ụwa
Nke a bụ nyocha anyị
Iṅụ mmiri na ekpotu ọkụ agwakọtara ya na mmanu Robb ọ na-enye aka imegide nje COVID-19?
A na-ejikarị mmanụ Robb iji belatatu àzụ̀zụ̀, oyi nkịtị, imi juru eju, isi ọwụwa na ahu mgbu. Enweghị ihe àmà na-egosi na ude mmanụ Robb na mmiri ọkụ na-egbu COVID-19. Kama, nke a nwere ike ibute nnukwu nsogbu ahụike.
Ekwesighị iloda mmanụ Robb ma ọ bụ tinye ya n’oghere imi. Otutu mmanu Robb nwere ihe ndi eji mee ya dika Menthol, Camphor na kwa Methyl Salicylate. Ọ bụrụ n’iribiga ha ókè, ihe ndị a niile nwere ike ibute nsị na mmerụ ahụ dị ukwuu na ahụike anyị    Olilo mmanụ Robb nwere ike ibutu ahụike gị, ụfọdụ n'ime ndị mejupụtara ya nwere ike ibutekwa onwụ ma ọ bụrụ na e were ya karịa .
Dabere na ozi ụgha, oputara na mgbe mmadụ bidoro nwewe ihe mgbaàmà ahụ, na ọ nwere ike buru na obutela ọrịa COVID-19. Nke a ọ bụ eziokwu?
Dabere na nchọpụta ndị e bipụtara na Annals of Internal Medicine , na nkezi, mgbaàmà nke COVID-19 na-aputa ihe nanị ụbọchị ise. Nchoputa a gosiputara na ihe dika 97.5% nke ndi mmadu bu oria ga ebido oria n’ime ubochi iri n’abuo ha bu oria mbu. Nke a na-egosi na tupu mmadụ amalite igosi ọrịa ahụ ma gosipụta na ọ bu ọrịa ahụ, ọ pụtara na ọ ga-ebi na nje ahụ ruo ọtụtụ ụbọchị.
COVID-19 ona-anọ n’akpịrị ruo awa iri na abụọ?
Enweghị ihe akaebe ọ bụla na-egosi na nje ahụ na-adịgide na akpịrị ruo awa iri na abụọ. Nje virus bi n’ime sel, ọ bụghị naanị ịnọdụ n’ime akpịrị ka enwere ike jiri mmiri ọkụ gbazee ya. Prọfesọ Trudie Lang na Mahadum Oxford kwuru na "enweghị usoro ndu" nke ga - akwado echiche ahụ bụ na ị nwere ike ịsa nje a nke na-anọ na ebe iku ume ka obanye n'ime afọ ma gbuo ya. ".
Onwere ndụmọdụ ndị nchịkọta okwu ahuike na mba dị icheiche nyere dị gbasara ozi ụgha ahụ?
Mba! Lelee usoro asaa nke ndị nchịkọta okwu ahuike na mba dị icheiche nyere iji gbochie mgbasa nke COVID-19 (https://youtu.be/8c_UJwLq8PI)
Smart Ikechukwu Mbagwu is a Nigerian scientist, educator and researcher currently based at the University of Fribourg, Switzerland. His current research focuses on understanding the mechanisms involved in the pathogenesis of cerebral malaria and immune response induced by malaria-infected red blood cells-derived extracellular vesicles. Smart is also a public health enthusiast and engages in science communication by organizing science outreach programs for schoolchildren and science teachers. He can be reached @wrytesmart@gmail.com/@SmartMbagwu